Akụkọ - Otu esi eji akwa nchekwa
Ratchet Kee Down
Otu esi eji akwa nchekwa
Kedu ihe eji eji akwa nchekwa n'ụzọ ziri ezi
(1) Ihe kpatara eji eji akwa nchekwa
Ihe nkedo nchebe nwere ike zere oke mbibi na ahụ mmadụ nke ọdịda dara na ihe ọghọm. Dabere na nyocha ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede ọdịda site na elu, ihe ọghọm ọdịda si n'ogo dị elu karịa 5m maka ihe dịka 20%, yana ndị nọ n'okpuru 5m na ihe gbasara 80%. Ihe mbu bu otutu ihe ojoo, o yiri ka 20% bu ihe omuma nke obere ihe omuma, ma ozugbo o mere, o nwere ike buru 100% nke ndu.
Nnyocha e mere achọpụtala na mgbe ndị mmadụ na-ada n’ala na mberede, ha na-ada n’ala, ọtụtụ n’ime ha na-ada n’ala ala ma ọ bụ na-adịkarị mfe. N'otu oge ahụ, ikike kachasị ike nke afọ (n'úkwù) mmadụ nwere ike iguzogide buru ibu ma e jiri ya tụnyere ahụ dum. Nke a abụrụla ihe ndabere dị mkpa maka iji akwa nchekwa.
(2) Gini mere eji eji ihe nchebe
Mgbe ihe mberede mere, ọdịda ga-eweta ike dị ala. Ike a na-adịkarị ukwuu karịa ibu mmadụ. Ọ bụrụ na ebe nkedo adịghị ike, ọ gaghị enwe ike igbochi ọdịda.
Imirikiti ihe mberede ọdịda bụ ihe ọghọm na mberede, ọ nweghịkwa oge maka ndị na-etinye ihe na ndị nlekọta iji mee ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ejiri njigide nchekwa ahụ n'ụzọ na-ezighi ezi, ọrụ nke nkedo nchekwa bụ efu.
Photo: Nkebi mba. YR-QS017A
Kedu otu esi eji akwa nchekwa maka ịrụ ọrụ n'ebe dị elu n'ụzọ ziri ezi?
1. Basic na-arụ ọrụ n'ebe dị elu nchekwa ngwaọrụ
(1) Eriri abụọ nchekwa 10-mita
(2) nchekwa nchekwa
(3) eriri eriri
(4) eriri na-ewelite ma na-eweli
2. Ihe eji eme ihe ma dozie ihe maka eriri eriri
Jide eriri nchebe na ebe siri ike ma tinye isi nke ọzọ na elu ọrụ.
A na-ejikarị ihe mkpuchi na usoro nkwụnye:
(1) Ọkụ ọkụ na paseeji. Usoro ngwangwa: Gbanye eriri nchedo gburugburu hydrant ahụ ma kechie ya.
(2) Na handrail nke korido. Usoro ngwangwa: Nke mbu, lelee ma ihe nkedo a siri ike ma sie ike, nke abuo, gafee ogologo eriri gburugburu isi abuo nke aka ya, ma mechaa sere eriri ogologo ahu iji nwale ma o siri ike.
(3) Mgbe anabataghị ọnọdụ abụọ a dị n'elu, tinye ihe dị arọ na nsọtụ ogologo eriri ahụ wee debe ya n'èzí ọnụ ụzọ mgbochi nke ndị ahịa. N'otu oge ahụ, mechie ụzọ mgbochi ohi ma chetara onye ahịa ka ọ ghara imeghe ọnụ ụzọ mgbochi iji gbochie ọnwụ nke nchekwa. (Mara: Enwere ike imeghe ọnụ ụzọ mgbochi maka ndị ahịa ya, ọ naghị atụ aro ya ka ị jiri).
(4) Mgbe ọnụ ụzọ mgbochi izu ohi enweghị ike ịgbachi n'ihi ọnụ ụzọ mbata na ịpụpụ nke ụlọ ndị ahịa, mana ọnụ ụzọ mgbochi na-enwe mgbochi nwere akụkụ abụọ, enwere ike ịgbachi ya n'ọnụ ụzọ mgbochi na-ezu ohi. Usoro ngwangwa: Enwere ike ịgbatị ogologo eriri gburugburu ejiri aka n'akụkụ abụọ ma jidesie ya ike.
(5) Mgbidi n’etiti ọnụ ụzọ na windo nwere ike ịhọrọ dị ka nkechi isi.
(6) A pụkwara iji arịa ụlọ buru ibu dị n'ime ụlọ ndị ọzọ dị ka ihe nke nhọrọ nkechi, mana ekwesiri iburu n'uche na: ahọrọla ihe eji eme ihe n'ime ụlọ a, ma ghara ijikọ na windo.
(7) isi ihe ndozi ndị ọzọ, wdg. Isi ihe: Ebe a na-agbanye ọkụ kwesịrị ịdị anya karịa ịbịaru nso, ihe ndị siri ike dịka ọkụ ọkụ ọkụ, ụzọ aka ụzọ, na ọnụ ụzọ na-emegide ohi bụ nhọrọ mbụ.
3. Otu esi eyi akwa nchekwa
(1) Ihe nkedo nchekwa ahụ dabara adaba
(2) idozi ikechi ikechi
(3) Kegide eriri nke eriri nchekwa na gburugburu nke dị n'azụ eriri nchekwa ahụ. Jide eriri nchebe iji jikọta eriri ahụ.
(4) Onye nlekọta na-adọta njedebe nke ihe nchebe na aka ya ma na-elekọta ọrụ nke onye ọrụ n'èzí.
4. Ebe na ụzọ maka machibido buckling nke eriri ụdọ na nchekwa njikota
(1) -zọ esere aka. A machibidoro onye na-elekọta ya iwu iji aka aka dị ka isi nke eriri nchekwa na belt nchekwa.
(2) ofzọ e si eke mmadụ. A machibidoro iwu iji usoro nke tethering ndị mmadụ dị ka usoro nchebe maka ikuku ikuku na ebe dị elu.
(3) Nkwado nkwanye ikuku na ihe na-adịghị agbanwe agbanwe na ihe na-agbanwe ngwa ngwa. A machibidoro iwu iji ihe ndozi ikuku dị n'èzí na ihe ndị na-adịghị agbanwe agbanwe na ihe na-agbanwe agbanwe dị ka ihe nkedo nke eriri oche.
(4) Ihe ndi nwere onu di nkọ na nkuku. Iji gbochie eriri nchekwa ka a ghara imebi ma gbajie, a machibidoro iji ihe dị nkọ dị ka isi nke eriri nchekwa na eriri nchekwa.
Photo: Nkebi mba. YR-GLY001
5. Ntuziaka iri maka iji na nchekwa nke njigide nchekwa na blet nchekwa
(1). A ga-ekwusi ike ịrụ ọrụ nke nchekwa nchekwa n'echiche. Ọtụtụ ihe atụ egosila na blet nchekwa bụ "eriri na-azọpụta ndụ". Agbanyeghị, mmadụ ole na ole na-ahụta ya dị ka nsogbu na ijikọ ihe nchekwa ma ọ bụ ihe na-adịghị mma ije ije na mgbada, ọkachasị maka obere ọrụ obere na obere oge, ma chee na "oge na ọrụ maka njigide nchekwa ahụ emechaala." Dị ka onye ọ bụla maara, ihe ọghọm ahụ mere n'otu ntabi anya, ya mere a ga-eyi eriri nchekwa dịka iwu si dị mgbe ị na-arụ ọrụ na elu.
(2). Lelee ma akụkụ niile adịghị mma tupu ojiji.
(3). Ọ bụrụ na enweghị ebe edobere maka ebe ndị dị elu, a ga-eji ụdọ waya nchara nke ike kwesịrị ekwesị ma ọ bụ usoro ndị ọzọ nakweere maka nghọta. A machibidoro ya iwu ka ọ kwụgidere ya na-agagharị ma ọ bụ jiri nkuku dị nkọ ma ọ bụ ihe rụrụ arụ.
(4). Kpọgidere elu ma jiri obere. Kpọgidere ụdọ nchebe n'ebe dị elu, a na-akpọkwa ndị na-arụ ọrụ n'okpuru mgbatị dị elu. O nwere ike belata ezigbo mmetụta dị anya mgbe ọdịda dara, na ntụle a na-eji ya maka obere nkedo na elu. N'ihi na mgbe ọdịda daa, ihe ga-eme n'ezie ga-abawanye, ndị mmadụ na ụdọ ga-edo onwe ha n'okpuru ibu mmetụta ka ukwuu, yabụ, a ga-ekokwasị nkedo nchekwa ahụ ma jiri ala mee ihe iji gbochie ojiji dị ala.
(5). Ekwesịrị ijikọ eriri nchekwa ahụ na onye otu siri ike ma ọ bụ ihe, iji gbochie ịgbanye ma ọ bụ nkukota, enweghị ike ịdọ eriri ahụ, ma kụọ nko ahụ na mgbanaka njikọ.
(6. A ga-echedo mkpuchi mkpuchi eriri nchekwa ahụ ka ọ ghara ịla n'iyi. Ọ bụrụ na achọpụtara mkpuchi mkpuchi ahụ mebiri emebi ma ọ bụ wepu, a ga-agbakwunye mkpuchi ọhụrụ tupu ojiji.
(7). Amachibidoro ịgbatị ma jiri njigide nchekwa na-enweghị ikike. Ọ bụrụ na ejiri eriri dị ogologo nke 3m na nke dị n'elu mee ihe, a ga-agbakwunye ya, a gaghị ewepụkwa ihe ndị ahụ na-enweghị isi.
(8). Mgbe i jiri eriri nchebe, attentionaa ntị na ndozi na nchekwa. Iji lelee akụkụ ịkwa akwa na akụkụ nko nke nkedo nchekwa ugboro ugboro, ọ dị mkpa ịlele n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụrụ na agbajila eriri a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ mebiri emebi.
(9). Mgbe ihe nchekwa nchekwa ejighị ya, ọ ga-edebe ya nke ọma. Ekwesighi ikpughere ya na oke okpomọkụ, oku na-emeghe, acid siri ike, alkali siri ike ma ọ bụ ihe dị nkọ, ekwesighi ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba mmiri.
(10). Ekwesịrị inyocha eriri nchekwa mgbe otu afọ gachara. A ga-eme nnyocha nyocha oge niile maka iji ya eme ihe ugboro ugboro, a ga-edochikwa ihe ndị na-adịghị mma ozugbo. nchekwa njikota s nke e jiri mee ihe mgbe niile ma ọ bụ nlele nlele anaghị ekwe ka ịga n'ihu iji ya.
Post oge: Mar-31-2021
anyị lastest ozi ọma
Kedu ihe kpatara eji achọ nchekwa?
Ọnụahịa ihe na-arị elu
Ekwentị: +86 13701626496
Adreesị: No.26, Huaicheng Knitting Park, Dukangqiao Road, Huaian District, Huaian City, Jiangsu, China
Copyright - 2020-2021: All Rights echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap - AMP Ekwentị